Somaliland oo Midowga Yurub u Jawaabtay ka dib Qisaastii – Radio Daljir
Abriil 16, 2015 9:50 b 0
Khamiis, Abriil 16, 2015 (Daljir) — Maamulka Somaliland ayaa si adag uga jawaabtay maanta hadalkii ka soo yeeray ururka Midowga Yurub ee Somaliland kaga dalbanayeen inay joojiyaan dilalka qisaasta ah oo dhowaan lagu fuliyey lix qof.
Wasiirka Cadaaladda iyo Garsoorka Somaliland Xuseen Axmed Caydiid, ayaa sheegay in aanay jirin wax ay hore u joojiyeen balse qisaasta iyo qofkii qof dilla in la dilo uu sharci-gooddu dhigayo, isla markaana aanay marna ogolaanayn in lagu qasbo sharci aan ahayn sharciga iyo dastuurka Somaliland, isago xusay in qisaasta la fuliyey ay ku hambalyeeyeen shacabka Somaliland.
“Dalkani qawaaniin iyo shuruuc uu dhigtay ayuu leeyahay, kuwaasaanna lagu dhaqmayaa cid iska hortaagi kartaa Somaliland inay qawaaniinteeda ku dhaqantaanna ma jirto cid kasta oo cambaarayn sheegtana iyaga ayay u taallaa,” ayuu yidhi Wasiirka Caddaaladda Xuseen Caydiid oo la hadlay warbaahinta dawladda.
Wasiir oo ka jawaabay in hore ay ujirtay inay joojiyeen dilalka Qisaasta ah waxa uu yidhi “Horena looma joojin, meel lagu yidhi waa la joojiyayna ma jirto imikana lama joojinayo dalku sharci ayuu leeyahay sharciga dalku cidda uu qisaaso ee mara qawaaniinta dalka cidna looga habran maayo fulintiisa iyo ku dhaqanka shuruucda dalka”.
“Cida ay qusayso qawaaniinta dalku leeyahay saamaynaysaa waa bulshada reer Somaliland bulshadayadiina way nagu hambalyeysay oo raalli ayay ka tahay fulinta qisaasta. Midawga Yurub waxay sheegayaan dalalkooda ha ku xukumaan, dalka Somaliland ma khusayso lagumana dhaqayo wax aan ahayn shuruucda u degsan ee uu qaranka ku yahay fulinta qisaastana nolosheenna ayaa ku jirta oo waxaad ka garan kartaa sida ay dadku ugu farxeen”ayuu raaciyey hadalkiisa.
Si kasta oo ay tahay, Qoraal shalay uu soo saareen Hoggaanka Midowga Yurub ayay ku cambaareeyeen dilka lagu fuliyey lix ruux, iyagoo ugu baaqay Somaliland inay joojiyaan dilalkaasi.